Isla Cristina | Akụkọ Njem
Maria | | Spain obodo, Osimiri
Isla Cristina bụ otu n’ime ebe ndị njem kachasị ewu ewu na ụsọ mmiri Huelva, nke dị kilomita ole na ole site na Portugal na ọ bụ naanị kilomita 60 site na obodo Huelva.
E hiwere ya dị ka obere ógbè azụ mgbe ala ọma jijiji Lisbon na 1755 gasịrị, enwebeghịkwa iota nke ọdịnala ụgbọ mmiri ya n'agbanyeghị mmepe nke njem. Nature bụ otu n'ime ebe ndị njem nlegharị anya nke Isla Cristina, ọ bụghị naanị maka ikuku dị mma nke a na-eku ume n'ụsọ osimiri ya mana maka ala ya bara nnukwu uru dị ka Natural Park nke Marismas de Isla Cristina.
1 Osimiri Isla Cristina
2 Islas Cristina ala ala
3 Osisi Na-efegharị
4 Azụ azụ Isla Cristina
5 Chọọchị nke Nwanyị Nwanyị Ndo
6 Ka esi aga Isla Cristina?
Osimiri Isla Cristina
Osimiri ndị dị na Isla Cristina nwere kilomita ájá iri na abụọ nke Oké Osimiri Atlantic na-asacha. Osimiri 10 ya na-agbaso usoro dị mma nke na-ekwe nkwa ịdị mma nke mmiri ya ma bụrụ nke akwadoro nke ọma.
Offọdụ n'ụsọ osimiri ndị a na-ewu ewu dịka Playa de la Casita Azul, La Central, La del Hoyo ma ọ bụ El Cantil. Ndị ọzọ dịka Icona Pesmar, Cruce de la Redondela, Punta del Caimán, Urbasur na Santana dị jụụ. Ekwesịrị ịkpọ aha n'ụsọ osimiri Parque Litoral na Isla de las Gaviotas maka oke mma ha.
Islas Cristina ala ala
Ihe ngosi nke onnithological di iche-iche na-eme na ala ala nke Isla Cristina, mpaghara nke ihe karịrị puku hectare abụọ ekwuputara na saịtị a na 1989. Ọ bụ mgbagwoju nke ala ala mmiri jikọtara ọnụ nke ọnụ mmiri Guadiana na Carreras, nke oke osimiri Atlantic na-enwe mmetụta dị ukwuu.
A na-eji ụkwụ na ịnyịnya ígwè chọọ mars Isla Cristina n'ihi na enwere ụzọ dị egwu. N'ụzọ dị otú a, ha ga-enwe ohere ịlele nnụnụ ndị na-anọkarị otu ebe dịka obere egret, ehi egret na mallard. Ọzọkwa nnụnnụ ndị na-agagharị agagharị nke na-azụ ebe a dị ka heron na-acha odo odo, ụgba ọcha na ube bekee.
Na nso ala mmiri nke Isla Cristina, e wuru ụlọ ọrụ Mareas n'etiti narị afọ XNUMX. Ugbu a, ọ nwere Centerlọ Ọrụ Ntugharị Mmadụ na Marsh, oghere iji mụta ihe niile gbara gburugburu ọdịdị ala ala mmiri ndị a.
Azụ azụ Isla Cristina
Ná mmalite nke post anyị na-ezo aka na mmalite njem nke Isla Cristina. Azụ ahịa ya bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa na Spen na n'ime ya ị nwere ike ịhụ ọbịbịa nke ụgbọ mmiri ahụ mgbe ụbọchị ịkụ azụ siri ike yana ibudata ngwa ahịa ma gaa otu n'ime azụ azụ. Ọnọdụ ahụ dị egwu, ọbụnakwa ha na-agagharị nlegharị anya maka otu.
Chọọchị nke Nwanyị Nwanyị Ndo
Ebe ọ bụ na e bibiri ụlọ ụka gara aga n'oge Agha Obodo, e wuru ụlọ nsọ a na 1940s n'okporo ámá Gran Vía. Ya facade na-acha ọcha na n'ime ya, a na-echekwa ọtụtụ ọrụ nka, dị ka ihe osise nke Virgen de la Soledad, nke malitere na njedebe nke narị afọ 1788, nke Rosary bụ onye nsọ nchebe nke Isla Cristina kemgbe XNUMX na ihe oyiyi Nuestra Señora del Carmen, onye na-echebe ndị ọrụ ụgbọ mmiri.
Ka esi aga Isla Cristina?
Enwere ike iru Isla Cristina n'okporo ụzọ, ụgbọ ala ma ọ bụ site na bọs, ya bụ, n'okporo ụzọ, ebe ọ bụ na ọ nweghị ọdụ ụgbọ oloko ma ọ bụ ọdụ ụgbọ elu. Agbanyeghị, obodo Huelva dị naanị kilomita 60 ma nwee ọdụ ụgbọ oloko.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Christina Island